1 year, 4 months ago 1713 Qoodi
Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammad dabalatee hoggantoota olaanoo Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) afur lagannaa nyaataarra jiraachu isaani hordofee dhukkubsachuu isaani fi Hospitaala dhuunfaa Laandimaark jedhamutti yaalamuuf gaafachuu isaani ni yaadatama.
Dhimma kana ilaalchisee murtoo manni murtii Hospitaala jedhameetti akka yaalaman murteesse mormuun Hospitaala mootummaatti yaalamu qabu kan jedhe Abbaa Alangaa Waliigalaa, Mana Murtii Olaanaaf iyyannoo galfatee ture.
Kana hordofuun Manni Murtii Olaanaa Federaalaatti dhaddacha Guraandhala 16 bara 2013 ALH ooleen haala eeyyama fi fedhii Hospitaala Laandimaark bu'uura godhateen akkasumas dambii ogummaa wal'aansa eeyyamuun garee Haakimoota gurmeessuun bakka himatamtoonni kunniin itti argaman mana sirreessaa Qaallittiitti dhaquun wal'aansa guutuu akka laatu murteesse ture.
Haata'u malee Hospitaalli Laandimaark "meeshaalee wal'aansa koo buqqiseen gara mana sirreessaa Qaallittii geesse wal'aansa laachuun na rakkisa," jechuun xalayaadhaan mana murtiif deebii kenneera.
Abukaatonni himatamtootaas maamiloota isaani gara Hospitaalatti fudhatamanii yaalamuuf akka eeyyamamuuf kaleessa Jimaata, Guraandhala 19 bara 2013 ALH Mana Murtii Waliigalaaf iyyannoo galfataniiru.
Maddi: Wazema Radio
JawarMohammed Dhaddacha BaqqalaaGarbaa Hospitaala Laandimaark
Manni murtii falmii yaala Obbo Jawaar Mohaammad fa'a irratti murteessuuf beellame